In ka badan Hal Malyan oo Codbixiyayaal ah oo saakay u dareeraya doorashada Somaliland | Weheliye Online
In ka badan Hal Malyan oo Codbixiyayaal ah oo saakay u dareeraya doorashada Somaliland
Inka badan Hal Malyan oo ruux oo ku nool Somaliland ayaa saaka u dareeray goobaha codeynta si usoo doortaan golayaasha Wakiiladda iyo Guurtida maamulka oo aan la qaban 15 kii sano ee la soo dhaafay.
Sanaadiiqda codbixinta ayaa taalo lixda gobol ee Somaliland kuwaas oo kala ah Awdal, Saaxil, Maroodi-Jeex, Toghdeer, Sanaag iyo Sool.
Codbixiyaasha waxa ay dooran doonaan 82 xildhibaan iyo 249 golaha guurtida ah.Waxaana doorashada codkooda dhiiban doona dadka ka badan hal malyan oo ruux halka goobaha codbixinta ay gaarayaan 2,709.
Qarashka ku baxaya doorashada oo gaareysa 25 malyan oo dollar ayaa boqolkiiba 80 waxaa bixinaya Maamulka Somaliland, halka Midowga Yurub iyo Taiwan ay bixin doonaan 20 boqolkiiba.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa sheegay in dhammaan agabkii doorashada la geeyay goobaha codbixinta.
Madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale kale dadweynaha ka codsaday in si nabad leh ay u codeeyaan, wuxuuna dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in si maskax ay ku jirto ay tahay in loo xalliyo haddii ay soo baxaan wax khilaaf ah oo ku aaddan natiijooyiinka ka soo bixi doona doorashada.
Waxaa Somaliland gaaray kormeerayaal ka socda dalal kala duwan sida safiirada Yurub badankooda ka jooga Geeska Afrika,31 oo isugu jiro kormeerayaal caalami ah oo dhammaantood kasoo jeeda Afrika oo u badan Afrikada dhexe iyo Afrikada galbeed oo uu kamid yahay madaxweynihii hore ee Sierra Leone.
Inta badan cabsida laga qabo in codadka lagu shubto ayaa aad u yar sababo la xariira booliska iyo kormeerayaa caalami ah oo goonjoog ah xarumaha doorashada ay ka dhaxeyso.
Somaliland waxay hormuud iyo ku dayasho u noqoneysaa dhamaan dagalka somalida ay dagto oo marar badan ka dhacaan doorasho aan loo dhameyn ama lacago badan oo laa luush ah uu bixiyo qofka doonayo kursiga,balse taas kama jirto somaliland waxa lagu kala baxayaa qof iyo codkii oo ay bulshadu u dooraneyso ruux ay is dhahaan wuu samatabixin kadhaa.
Previous articleCiidamada Haramcad oo dil ka geystay maagalada jowhar iyo Dad Ka Careysan Oo Banaanbax Dhigay
Next articleShariif Sheekh Axmed ma u dhiman karaa siyaasadiisa ku wajahan Sool iyo Sanaag?